Dalka Masar oo marti gelin doona koobka qaaradda Afrika - Halbeeg News
Dalka Masar oo marti gelin doona koobka qaaradda Afrika
Dalka Masar ayaa martigelin doona koobka dalalka qaaradda Afrika kadib markii guddiga fulinta xiriirka kubadda cagta ee Aftika ay kala laabteen xuquuqda martigelinta dalka Cameroon sababo la xiriira amni darro iyo u diyaar garoow la’aan.
Dalka Masar ayaa martigelin doona ciyaaraha kama danbeysta ah waana markii 4aad oo uu dalka Masar ciyaartani martigeliyo.
Dalka Masar oo 2006-dii ay aheyd markii ugu danbeysay ee uu koobkani martigeliso ayaa 7 jeer ku guuleysatay tartamada qaramada qaaradda Afrika.
Dalka Masar ayaa soo dhaweyn doona 24-ka xul ee ku tartami doona koobka oo la ciyaari doono inta u dhaxeysa bilaha June-July.Martigelinta koobka Qaramada Africa ee Masar ayaa ka danbeysay kadib marki laga soo wareejiyay Cameroon oo ku guuldareystay in ay diyaar u noqoto sababo la xiriira diyaar-garoowgeeda oo aad u liitay.
Go’aanka shalay ay qaateen guddiga fulinta ee xiriirka kubadda cagta ee Afrika ayaa ka dhigan in dalka Masar uu heysato shan bil oo kaliya si uu isugu diyaariyo marti gelinta koobka.
Dalalka Koonfur Afrika iyo Masar ayaa bartimihii Diseembar soo buuxiyay shuruudihii martigelinta koobka balse guddiga ayaa doortay dalka Masar kadib markii dib u eegis lagu sameeyay soo jeedinta labada dal.
Mareykanka oo duqeyn ku dilay xubno ka tirsanaa Al-shabaab